Insta360 waxay soo saareysaa 'Go' cusub, kaamiradda ugu yar ee wax xasilisa suuqa | Wararka IPhone
Haddii aan ka hadalno tayada, kamaradaha "la awoodi karo", iyo kuwa la qaadi karo, in badan oo idinka mid ah ayaa ka fikiri doona GoPro. Laakiin runtu waxay tahay in bilihii ugu dambeeyay sumad Shiineys ah ay bixinaysay waxyaabo badan oo looga hadlo: Insta360. Sumad kamarad ku takhasusay duubista 360, haddaba magaceeda…
Maantana waxaan kuu keenaynaa kuwii ugu dambeeyay ee ay soo bandhigeen: the Insta360 Go, kamarad ficil cusub oo culeyskeedu yahay 18.3 garaam oo keliya waana cabir fara ah. Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato Insta360 Go cusub? Ka boodka ka dib waxaan ku siineynaa dhammaan faahfaahinta kamaradan waxqabadka cusub ee imaaneysa si xukunka looga dhigo GoPro.
Insta360 ayaa markan noo keenay a kamarad ficil, waa u qalantaa inay ku dhejiyaan magaca 360 magaca astaanta lafteeda, laakiin tan Insta360 Go wax shaqo ah kuma laha duubista cajaladaha 360 digrii ah. Insta 360 Go wuxuu leeyahay muraayad leh furitaan f / 2.1 iyo dareemayaal duuba ilaa xalka 2720 ​​x 2720. Diiwaanada 30fps ama 100 iyadoo la adeegsanayo qaabka slomo. Kaamiro raacaysa falsafada qaybta qabashada iyo tafatirka barnaamijka laftiisa si aad uga hesho fiidiyowyo qaabka saadka ugu saafiya.
Sida walaasheed weyn Insta360 One X, Insta360 Go cusubi waxay leedahay a Xasilinta FlowState, xasilinta gyro ee lix-dhidibka ah ee shirkadda Insta360. Waa in la dhaho xasilintani waa iyada oo loo marayo barnaamijka mahadnaqa xawaareyaasha ay kamaraddu leedahay. Sidee markaa suurtagal u tahay in la xasiliyo fiidiyowga? sameynta wax yar oo ka mid ah Cidhifyada fiidiyowga ee barnaamijka softiweerka ah ayaa la jarjarey oo u wareejiya fiidiyaha si loo xasiliyo. Waxay u shaqeysaa sifiican waxayna siineysaa dareenka ah inaad kamarad ku haysato gimbal. Si aan fikrad kaa siino, qaraarka aan kahadleynay waxaa looyareeyay 1920 x 1080 markii ladayay dhoofinta fiidiyowga sababtuna tahay goosgooska ka socda FlowState.
Sidoo kale waxay leedahay wax fiican biyo ma galeen (adkaysiga 10 ilbidhiqsi) inkasta oo sida iska cad aan loo isticmaali karin quusitaanka. Haa ma leh suurtagalnimada keydinta la ballaarin karo, waxay leedahay 8 Gb in kasta oo laga bilaabo Insta360 ay dhahaan waan duubi karnaa ilaa 200 oo clips maalintii oo ah 20 ilbidhiqsi midkiiba. Tani waxay sidoo kale ku mahadsan tahay baytarigeeda, inkasta oo aynaan garanayn awoodda ay leedahay, haddana waxay iska caabineysaa heerka duubitaankan.
Sida aad ku arki karto sawirkii hore, Insta360 Go ayaa la socda a noocyo kala duwan oo qalab ah, dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin magnetismka kamaradda, maaddaama falsafadda ay ku iibinayaan kamaraddan ay si sax ah u tahay tan. Waxaan ku "lifaaqnaa" santuuqa, koobabka nuugista, ama xeedho iyada oo la adeegsanayo magnet-ka kamaradda, dhammaantoodna leh "wireless" khibrad ah.
Soo jeedin xiiso leh oo ka mid ah Insta360 Tag oo loogu talagalay qof kasta oo raadinaya kamarad waddada ka baxsan, waxay leedahay a qiimaha 229,99 yuuro oo waxaan ka iibsan karnaa websaydhka rasmiga ah ee astaanta inkasta oo ay hubaal tahay inay imaanayso bilaha soo socda dukaamada kale oo xitaa gaari karto Apple Store.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Insta360 waxay soo saareysaa 'Go' cusub, kamaradda ugu yar ee wax xasilisa suuqa